Fahad iyo Farmaajo oo maleegaya fowdo amni | KEYDMEDIA ENGLISH
Fahad iyo Farmaajo oo maleegaya fowdo amni
Wuxuu xasay in la foojignaado maalmaha saxmadda badan ee ciidda, wuxuuna soo jeediyay in muwaadin waliba qeyb ka qaato, sidii looga gudbi lahaa marxaladdaan adag, loogana hor tagi lahaa hagar-daamada ay maleegayaan kooxda sharci darrada ku deggan Villa Somalia.
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliye ku xigeynkii hore ee Nabada-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, General Cabdalla Cabdalla, ayaa ka digay fowdo siyaasadeed iyo khalkhal galin amni oo Fahad iyo Farmaajo maleegayaan, si ay u carqaladeeyaan doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
General Cabdalla, wuxuu sheegay si looga badbaado, qorshaha halista ah oo ay soo wadaan Kooxda waqtigu ka dhamaaday, in loo baahan yahay dadajinta waqtigeynta doorashada Maaxweynaha. “Haddii ay waqti helaan waxa ay ka shaqaynayaan waa wada garan karna waa qarax iyo fowdo”, ayuu yiri.
Guddoonka Baarlamaanka labada Aqal, ayuu ugu baaqay in ay la wareegaan masuulidda dalka, gaar ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka, ayuu u sheegay inuu yahay ku simaha xilka Madaxweynaha, maadaama muddo sharciyeedkii Maxamaed Farmaajo dhamaaday sanad iyo saddex bilood ka hor.
“Guddoonka Baarlamaanka shaqo ayaa u taalla wixii berri ka danbeeya, dalkana ayaga wax laga weydiinaa, wixii xalay ka danbeeyay, Kusimaha Madaxweynaha waa Gudoomiyaha Golaha shacabka, lagana filayo inuu sida ugu dhaqsaha badan ku qabto Doorashada Madaxweynaha”. Ayuu yiri Cabdalla.
Wuxuu xasay in la foojignaado maalmaha saxmadda badan ee ciidda, wuxuuna soo jeediyay in muwaadin waliba qeyb ka qaato, sidii looga gudbi lahaa marxaladdaan adag, loogana hor tagi lahaa hagar-daamada ay maleegayaan kooxda sharci darrada ku deggan Madaxtooyada ee guuldarrooyinka kharaar ku socdaan.
“Waqtigu waa yar yahay, Fahad iyo Farmaajo, inay amni darro iyo khalkhal abuuraan ayay ku fikirayaan, waa inaan waqti lasiinin, oo washamsiga lagu sii wado, qof walba oo muwaadin ah waajib ayaa ka saaran amniga guud ee dalka, waxaana fooda nagu soo haya maalmihii Ciidda”. Ayuu ku sii daray.
Taliye ku xigeynkii hore ee Hay’adda NISA, General Cabdalla Cabdalla, wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka sida weyn ugu dhuun duleela isku milanka Al-Shabaab iyo Hay’adaha Amniga, wuxuu dhowr jeer oo hore sheegay in F&F, si aan qarsoodi lahayn u adeegsadan Al-Shabaab si ay danahooda u gaaraan.